Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Saaka: Sancho, Pochettino, Alli, Eriksen, Christie, Shaqiri, Holding
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Sancho, Pochettino, Alli, Eriksen, Christie, Shaqiri, Holding
January 2, 2021 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United ayaa rumeysan inay la soo saxiixan karaan 20 jirka garabka ka ciyaara ee reer England Jadon Sancho kaasoo ay kala soo wareegi karaan kooxda Borussia Dortmund wax ka yar 100 milyan oo ginni sannadkan. (90 min)
Tababaraha cusub ee Paris St-Germain Mauricio Pochettino ayaa lala xiriirinayaa laba ka mid ah ciyaartoydiisii ​​hore ee Tottenham – khadka dhexe reer England Dele Alli, 24 jir, iyo kubadsameeyaha kooxda Inter Milan ee Denmark Christian Eriksen, oo 28 jir ah. (AS)
Liverpool ayaa bedeshay mowqifkeedii ay ka qaadatay garabka Switzerland Xherdan Shaqiri, oo 29 jir ah, umana ogolaan doonto inuu baxo bishaan. (Liverpool Echo)
Arsenal ayaa ku biirtay kooxo badan oo Premier League ah oo xiiseynaya ciyaaryahanka khadka dhexe ee Celtic iyo xulka Scotland Ryan Christie, oo 25 jir ah, waxayna rajeyneysaa in daaficii bidix ee hore ee Bhoys Kieran Tierney, oo 23 jir ah, uu ka dhaadhicin karo inuu u dhaqaaqo Emirates Stadium. (90min)
Dhanka kale, tababaraha Gunners Mikel Arteta ayaan hubin in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Mesut Ozil uu ku soo laaban doono kooxda. 32 jirkaan ayaan u ciyaarin Arsenal xilli ciyaareedkan. (Sky Sports)
Tababare Jose Mourinho ayaa sheegay inay layaab weyn noqon laheyd hadii Tottenham ay ku mashquuso suuqa kala iibsiga bisha Janaayo wuxuuna ku adkeysanayaa inuusan weydiisan doonin gudoomiyaha kooxda Daniel Levy xoojin. (Standard)
Borussia Dortmund ayaa xiiseyneysa 18 jirka garabka uga ciyaara kooxda Manchester City Jayden Braaf. (Dailymail)
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa meesha ka saaray soo jeedimaha ku aadan in ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Croatia Luka Modric 35, daafaca reer Spain Sergio Ramos, 34, iyo ciyaaryahanka korontada Spain ka ciyaara ee Lucas Vazquez, 29, ay ka tagayaan kooxda. (Teamtalk)
Daafaca reer England ee Arsenal Rob Holding, oo 25 jir ah, ayaa ku dhow inuu ogolaado qandaraas cusub oo waqti dheer ah, taasoo soo afjaraysa rajada kooxaha waa weyn ee doonaya inay amaah ku qaataan. (Telegraph)
Tababaraha Chelsea Frank Lampard wuxuu heystaa “fikrado” bisha janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, laakin waxaa laga yaabaa inuu yareeyo tirada kooxdiisa ee iibka iyo amaahda ka hor inta uusan boos u helin inuu qarash gareeyo. (Goal)
Juventus ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Shandong Luneng oo 35 jir ah weeraryahankii hore ee Italy Graziano Pelle, kaasoo lala xiriirinayay West Ham. (Goal)
Tababaraha Everton Carlo Ancelotti ayaan hor istaagi doonin ciyaartoy kasta oo doonaya inay baxaan bishaan laakiin waxa uu sheegay inaysan jirin wax dalab ah oo 29 jirka weerarka Turkiga Cenk Tosun. (Liverpool Echo)